Naanneessaa fayyadamuudhaan Galmee Qiqindeessuu
Qaree barruu gara mataduree galmicha keessaa tokkotti ariitiidhaan siiqsuudhaaf, tarree Naanna'aa keessatti mataduricha lam-cuqaasi.
Mataduree tokko Galmicha keessatti Oli ykn Gadi Siiqsuudhaaf
Gulantaaleen mataduree hundi nannaa'aa keessatti mul'ifamuu isaanii mirkaneessi. Durtiidhaan gulantaaleen hundi ni mul'ifamu. Gulantaaleen mataduree mul'ifaman akkamitti akka jijjiiraman dhawata ilaali.
Kamshaa Durtii irratti, sajoo Naanna'aa cuqaasi banuuf Sajoo cuqaasi.
Mataduree tokko, tarreeNaanna'aa keessaa, gara iddoo haaraati Harkisii
Sadarkaa Mataduree tokko Oleessuu ykn Gadeessuu
TarreeNaanna'aa keessaa mataduree filadhu.
Lakkoofsa Sadarkaa Mataduree Agarsiisaame Jijjiiruuf
Title is: Naanneessaa fayyadamuudhaan Galmee Qiqindeessuu